Ny fiara, ny fandraisana, ny fety sy ny ivelany rehetra e ! Ary dia nahatsiaro ho nahavita tokoa ireo tompon'andraikitra ka arahabaina tokoa raha izay no voninahitra tena katsahiny.
Fa ny tena andrasana indrindra amin'ny mpitondra anie ka ny fanasoavana ny vahoaka e ! Hiaro azy amin'ireo loza maro isan-karazany. Akory ny alahelo raha naheno fa maro ireo Malagasy namoy ny ainy nandritry ny fifanosehana omaly teny Mahamasina.
Nahoana ny fanjakana no tsy mitaiza sy manabe ny vahoaka hifanaja sy hilamina ? Adidiny indrindra izany ary manana ireo haino aman-jeriny izy hanaparitahana ny hevitra tsara rehetra. Indrisy fa zary lasa fitaovana hanehoana endrika ivelany sy tahaka ny fanaovana propagandy fotsiny ny TVM sy ny RNM. Tahaka izany ihany koa no andrasana manoloana ireo lozam-pifamoivoizana maro mitranga etsy sy eroa. Mila beazina ny vahoaka mpampiasa ny lalana fa tsy sanatria mody mandefa taratasy fiaraha-miory sy mody mandeha mamangy eny amin'ny hopitaly no asan'ireo tompon'andraikitra. Eto am-pamaranana dia antenaina fa horaisin'ireo mpitantana izao soso-kevitra izao. Ary iriana indrindra mba tsy hionona amin'ny endrika ivelany sy hitady voninahitra fotsiny izy ireo fa tena hijery izay tena mahasoa ny Malagasy.